Mooshinka dhanka ka ah RW Somalia, C/weli Sh. Axmed ayaa loo qaybiyay xildhibaannada baarlamaanka Somalia iyadoo xildhibaannada mooshinka kasoo horjeeda ay ku buuq ku kiciyeen – Djiboutination
HomeOpenion Mooshinka dhanka ka ah RW Somalia, C/weli Sh. Axmed ayaa loo qaybiyay xildhibaannada baarlamaanka Somalia iyadoo xildhibaannada mooshinka kasoo horjeeda ay ku buuq ku kiciyeen Mooshinka dhanka ka ah RW Somalia, C/weli Sh. Axmed ayaa loo qaybiyay xildhibaannada baarlamaanka Somalia iyadoo xildhibaannada mooshinka kasoo horjeeda ay ku buuq ku kiciyeen
- November 24, 2014 - in Openion 159 0 script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
Mooshinka dhanka ka ah RW Somalia, C/weli Sh. Axmed ayaa loo qaybiyay xildhibaannada baarlamaanka Somalia iyadoo xildhibaannada mooshinka kasoo horjeeda ay ku buuq ku kiciyeen guddoomiyaha baarlamaanka Somalia. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa isku dayay inuu xildhibaannada buuqa waday xakameeyo, balse way ka dhego adaygeen iyagoo buuqooda iska sii watay, waxaana taasi ay keentay in guddoomiyuhu uu hoolka shirarka ee baarlamaanka isaga baxo. Xildhibananada kasoo horjeeda mooshinka ayaa la sheegay inay jeexeen nuqulladii mooshinka ahaa ee loo qaybiyay, halka kuwii taageersanaana ay horay u qaateen nuqulladii loo qaybiyay. Wararka ayaa sheegaya in guddoomiyaha baarlamaanka uu haatan ku sugan yahay xafiiskiisa Villa Hargeysa, halkaasoo lagu wado inuu dhawaan kasoo saaro warbixin ku saabsan xildhibaannada buuqa sameeyay. Mudanayaasha kasoo horjeeda mooshinka ka dhanka ah ra’iisul wasaaraha Somalia iyo xukuumaddiisa ayaa isku dayaya weli inay hojoogsadaan inuu mooshinkaas noqdo mid socda, iyadoo aan la ogeyn go’aanka uu Jawaari ka qaadan doono xildhibaannadaas. Buuqa xildhibaannada kasoo horjeeda mooshinka ay ka sameeyeen golaha baarlamaanka ayaa noqonaya kulankii saddexaad oo sidan oo kale ay uga sameeyeen baarlamaanka, iyadoo xildhibaannadu ay buuqa kaddib isaga baxeen hoolka. Lama oga xilliga la isku soo laaban doono, waxaase tani ay sii xoojinaysaa jahwareerka ka taagan baarlamaanka iyo kala qaybsanaanta u dhexeysa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Previous article Somalia Lawmakers are scheduled to hold the first session of their meeting today to debate a no-confidence motion against Prime Minister Next article VIDEO: Wixii maanta dhacey iyo sidii Jawaari uga cararay xarunta shirka About the author djibouti